Germany amachibidoro ire smartwatch nke emere maka ụmụaka nọ n’agbata afọ ise na iri na abụọ | Akụkọ akụrụngwa
Germany amachibidoro ire smartwatch emere maka ụmụaka nọ n'agbata afọ ise na iri na abụọ
Ma ọ bụ na nkà na ụzụ abụghị ihe ngwọta mgbe niile ma dịka e gosipụtara n'ọtụtụ oge, ị ga-enwerịrị ezi uche na ya. Enwere ike ịkọwa okwu Germany na mba ọ bụla na European Union, ebe ọ bụ na n'ọnọdụ a ụfọdụ elekere amamịghe ndị amachibidoro na ụfọdụ ndị nne na nna na-azụta ụmụ ha nwere ike nyochaa na nledo na umuaka ma obu onye obula yi ha oge obula.
Onye na-ahụ maka mmachibido iwu a bụ Federal Network Agency, nke na-akọwa ma ọ bụ karịa na-arụ ụka mkpebi a nwere ike ige ntị na mkparịta ụka ụmụaka. ịgbalite igwe okwu nke smartwatch ndị a na-ebu remotely.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ nsogbu bụ isi ha rụpụtara na nche elele anya nke jikọtara kaadị SIM yana nke etinyere ọkachasị ụmụaka nọ n'agbata afọ 5 na afọ iri na abụọ iji nyochaa usoro ụmụaka. Ọgwụgwụ nke ngwaọrụ ndị a enweghị ike ime ka ha zie ezi dịka onye nledo na ọ bụ ya mere ọrụ ụdị ụdị elekere a webatara na-enye ohere nne na nna na-akpọ oku na ngwaọrụ ahụ n'ebughị ụzọ mara ma gee ntị na mkparịta ụka ahụ site na igwe okwu agwakọtara, enweghị ike ire ha na mba ahụ.
Ọ na-ajụdị ndị nne na nna ahụ nwere ụdị elele anya ndị a n'aka ha ka ha laa ha n'iyi ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbụ isi iyi nke nsogbu iwu gbasara nzuzo nke ndị mmadụ. A na-ekwukwa na ụfọdụ ndị nne na nna jiri ụdị elekere a ka ha gaa ledoo na klaasị ụmụ ha ma nke a weta nnukwu nsogbu. Onye isi oche nke Federal Network Agency, Jochen Homann, jụọkwa na ozugbo elekere ahụ bibiri a na-arịọ asambodo ịgba akaebe na nke a. Nke a bụ okwu na-echegbu obodo German, ebe ọ bụ na nwa oge gara aga, otu ihe ahụ mere otu nwa bebi - Cayla nwa bebi - nke nwere ike ị ofa ntị ma soro ụmụntakịrị na-ekwurịta okwu na ụlọ na ekele niile maka njikọ Bluetooth na Internet kwere ka ọrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Germany amachibidoro ire smartwatch emere maka ụmụaka nọ n'agbata afọ ise na iri na abụọ
Sony na-ebupụta azụmahịa Black Friday dị ịtụnanya
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma Amazon Black Fridady na-eme maka taa